एमसीसी राम्रो सग पढ्न नसक्ने रावलकाे पीचएडी नक्कली – बाबुराम भट्टराई – Cn Chautari
माघ १८, २०७८ मंगलबार 555
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर दुई ‘डाक्टर’ नेताबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र एमाले नेता डा. भीम रावलबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।डा. भट्टराईले आफूमाथि गलत ।
आरोप लगाएको भन्दै डा. रावलको पीएचडी कतै नक्कली त हैन भनी आशंका गरेका छन् ।सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नेता लेख्दै डा भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी सम्झौता भएको भनेर डा रावलले गलत आरोप लगाएको बताए ।उनले भनेका छन्, ।
‘यी कण भीम रावलले पीएचडी गरेको भनेर नाउँको अगाडि डा. पनि झुन्ड्याउँछन्, विद्यावारिधि गर्दा कसैबारे कुनै दाबी गरियो भने त्यसको स्रोत, मिति र स्थान खुलाउनुपर्छ । उनले दाबी गरेजस्तो बाबुरामले गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गरेको ? हो भने कहिले, कहाँ, कसरी खुलाउनु पर्दैन ?।
कि यी नक्कली पीएचडी हुन् ?त्यसअघि डा रावलले सांसदहरूलाई स्मृति पत्र भन्दै एक सन्देश जारी गरेका थिए, जसमा डा भट्टराईले गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौता गराएको आरोप समेत थियो । उनले भनेका थिए
Prevभोलिसम्म एमसीसी पास नगरे अमेरिकाले फिर्ता लैजाने ! अब के हुन्छ?
Nextमन्त्री प्रेम आले को एक युवती सङ्ग को रोमान्टिक डान्स भयो भाईरल देस भर मन्त्री आलेको आलोचना (हेर्नुहोस भिडियो)
महाकाली सन्धि ठीक थियो, चार अर्ब आइरहेको छ: ओली